ချီဝဲလ်ထက်ကောင်းတဲ့ ယူနိက်တက်ကြယ်ပွင့်ကို မထည့်လို့ ဆောက်ဂိတ်ကို ဝေဖန်တဲ့ ရွိင်ကိန်း – FBV SPORT NEWS
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အသင်းမှာ ထူးချွန်တဲ့ကစားသမားဖြစ်သလိုပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီမှာ ခြေစွမ်းကောင်းတွေပြခဲ့တဲ့ ကစားသမားကို ယူရို၂၀၂၀ပထမပွဲမှာတည်းက မသုံးခဲ့လို့ အင်္ဂလန်နည်းပြဆောက်ဂိတ်ကို ယူနိက်တက်ဂန္တဝင်ကစားသမားဟောင်း ရွိင်ကိန်းကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နေ့က အင်္ဂလန်နဲ့ရိုမေးနီးယားပွဲမှာ စတင်ပွဲထွက်ကစားခဲ့တဲ့ လုရှောနဲ့ပက်သက်ပြီး ရွိင်ကိန်းက ဆောက်ဂိတ်ကို ဝေဖန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.
အင်္ဂလန်နည်းပြဆောက်ဂိတ်ကတော့ ဒီနှစ် ယူရိုမှာ လူစာရင်းကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး ယူနိက်တက်ကစားသမားဟောင်းကြီးတွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုခံနေခဲ့ရပါတယ်။
လုရှောနဲ့ပက်သက်ပြီး ရွိင်ကိန်းကတော့ အင်္ဂလန်ရဲ့ ပထမဦးစားပေးရွေးချယ်မှုမှာ ယူနိက်တက်မှာ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ထားတဲ့ လုရှောကိုချီဝဲလ်ထက်ဦးစားပေးသင့်တယ်လို့ရွိင်ကိန်းကယုံကြည်နေတာပါ။
ရှောဟာယူနိက်တက်အသင်းအတွက် အသင်းသားတွေရွေးချယ်တဲ့ အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကိုလည်း ဒီနှစ်မှာရရှိထားပါတယ်
အင်္ဂလန်အသင်းနည်းပြဆောက်ဂိတ်ဟာယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲအတွက် အပြီးသတ် ၂၆ ဦး လူစာရင်းကို ကြေညာ ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေနဲ့ ဘောလုံးကစားသမားဟောင်းကြီးတွေကြားထဲ တော်တော်လေးပြောစရာ ဝေဖန်စရာတွေဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်.
အခုဆိုရင် လီဗာပူးနောက်ခံလူအာနိုးကိုပထမပွဲမှာထည့်ကစားတာဟာ ဒဏ်ရာရသွားလို့အာနိုးလည်းနှုတ်ထွက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
ယူနိက်တက်ကဂရင်းဝုဒ်ကတော့ ဒဏ်ရာ ပြဿနာကြောင့် အသင်းလူစာရင်းကနေ နှုတ်ထွက် သွားခဲ့ပြီး လီဗာပူးအသင်းခေါင်းဆောင် ဟန်ဒါဆန် ယူနိက်တက်အသင်းခေါင်းဆောင်မက်ဂွိုင်းယားတို့အတွက်လည်းဆောက်ဂိတ်ခေါင်းကိုက်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်နေပါပြီ.ဒါတွေကဆောက်ဂိတ်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေပဲဖြစ်လို့ ဝေဖန်မှုတွေကို သူဘယ်လိုသက်သေပြပြီးချေဖျက်ပြမလဲဆိုတာပဲစောင့်ကြည့်ရတော့မှာဖစ်ပါတယ်။